630mm PVC Khadka Xaraashka tuuboyinka ee Masar
Bishii Maajo, injineerada Grace waxay yimaadeen Wabiga Niil ee quruxda badan si ay u khayaaneeyaan una maamulaan laba khadadka wax soo saarka tuubbada ee loo yaqaan 'PVC 315-630mm. Khadka wax soo saarku wuxuu ka kooban yahay qalabka wax lagu kala wareejiyo ee mataanaha isku dhejiska ah, sanduuqa faakiyuumka, sanduuqa buufin, cagaf, mashiinka wax lagu jaro, iyo mashiinka wax shida; cutubku wuxuu leeyahay p ...
Warshadaha Wasaaradda Ciraaq
Kani waa mashruuc weyn oo ka socda Wasaaradda Warshadaha Ciraaq. Mr. Manhal Aziz Al Khabaz, Wasiirka Wasaaradda Warshadaha iyo Macdanta ee Ciraaq, iyo Ahmed Hussein oo ah Agaasimaha SCCI ayaa ka soo qeyb galay xafladda furitaanka Qalabka Pipe Grace. Dr. Hussein Muhammad Ali, lataliyaha horumarinta ee Mi ...
Logo Cusub, Sawir Cusub
GRACE waxay ku saleysan tahay Jiangsu Shiinaha, waxayna ku haysaa horumarka adduunka oo dhan aragtida. Waxay diiradda saaraysaa wax soo saarka balaastigga ah iyo dib-u-warshadaynta qalabka wax soo saarka, GRACE waa qalab-soo-saare qalab isku-dhafan naqshadeynta, R&D, soo-saarka, iibka iyo adeegga. GRACE CUSUB LOGO waxay la jirtaa dhiirrigelin sharaf, si loo furo ...
Qalabka waxaa si guul leh u aqbalay shirkadda Total
Dhawaan, Fududeeyaha TPE-ga loo yaqaan 'Extruder' ee loo yaqaan 'TOTAL' oo ka socda Faransiiska ayaa si guul leh u socda. Inta lagu jiro muddada imtixaanka, shaqaalaha hubinta ayaa aad ugu qanacsan tayada qalabka, dhanka kale, waxay aad u ammaanaan dabeecadda adag ee shaqada leh, tayada shaqo ee tayada sare leh, awoodda farsamo o ...